သင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - WorldRef
ထက်ပိုပြီး 2,700 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်တန်းဆရာ 25 ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ
စက်မှု - အထူးပြုသင်တန်းအစီအစဉ်များ
လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၅ ခုကျော်ရှိသည့်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးနယ်ပယ်များမှနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပြများကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွခေါ်ဆောင်သည်။
ခေတ်မီ interactive ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများမှတဆင့်သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ ကမ္ဘာကြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး!
Gen Z ၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့် Boomer ၏ ၂၁% သည် အကယ်၍ သူတို့၏မန်နေဂျာများထံမှအသိအမှတ်ပြုခံရပါကအချိန်ပိုသင်ယူရန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရန်အချိန်ပေးလိမ့်မည်။
(LinkedIn မှ 2020 အလုပ်ခွင်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ)
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများ
အော်ပရေတာသင်တန်း & ခြင်း simulation
ခေါင်းဆောင်မှု & စီမံခန့်ခွဲမှု
အော်ပရေတာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအား ၄ င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်ရလဒ်များတိုးမြှင့်ရေးအတွက်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်သက်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများပေးရန်လေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းများ။
အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကသော့ချက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုထားသော modular ကော်ပိုရိတ်သင်တန်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
တက်ကြွသော & စိတ်အားတက်ကြွသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး
ဦး ဆောင်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လုပ်သားအင်အားကို ဦး ဆောင်လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိစေသည်။
သင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရောစပ်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျင့် ၀ တ်များကိုတိုးတက်စေပါ။
သင်၏ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်စီမံကိန်းများ / အမိန့်များကိုအောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ရန်ကူညီပါ။
ဆက်သွယ်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိခြင်း။
CEO - Co-Founder၊ Audaxia Global Ltd၊ ထိုင်း
သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင်အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်သည့်စီအီးအိုများသည်လာမည့် ၁၂ လအတွင်းကြီးထွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။
(PwC ၏ ၂၃ ​​နှစ်မြောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီအီးအိုစစ်တမ်း၊ ၂၀၂၀)
သင်ယူမှုနှင့်လေ့ကျင့်မှုဖွဲ့စည်းပုံသည်လုံးဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးသင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအရင်းအမြစ်များကို ရွေးချယ်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာနှင့်အခြားစက်မှုသင်တန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်တွင်းသင်တန်းဆရာများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပထဝီဝင်အနေအထားများရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောဗဟုသုတနှင့်သက်ဆိုင်သောအသင်းအဖွဲ့များရှိသည်။ သင့်အားလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်စေသည်။
သမားရိုးကျလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသလဲ။
WorldRef တွင်သင်သည်ပထဝီဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များရှိသော်ငြားလေ့ကျင့်ရေးအရင်းအမြစ်များကိုသင်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျယ်ပြန့်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောသင်ယူမှုနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါရေတို / ရေရှည်အခြေခံပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူများငှားနိုင်ပါသလား?
သေချာတာပေါ့, ငါတို့စစ်ဆေးပါ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အားဖြေရှင်းနည်းများ အသေးစိတ်ကို။
လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။